TINA - एनालग, डिजिटल, MCU र मिश्रित सर्किट सिम्युलेटर
सर्किट अनुकार मा व्यापक अनुभव संग एक सफ्टवेयर कम्पनी को रूप मा र एक कम्पनी को रूप मा कि दुनिया को सबै भन्दा ठूलो अर्धचालक कम्पनीहरु को सर्किट सिमुलेटर सफ्टवेयर लाई लाइसेन्स दि्छ, DesignSoft मा एक अद्वितीय अंतर्दृष्टि र उपकरण मोडेल विकसित गर्न को अनुभव छ। हाम्रो सफ्टवेयर र मोडेलिंग क्षमता... समर्थन SPICE, VHDL, Verilog, Verilog-AMS, SystemC मोडेल र आधुनिक एकीकृत सर्किटहरूको मिश्रित सर्किट मोडेल। हामी टिटिओ, पी। को लागि सिन्ट्याक्स मिल्ने मोडेल बनाउँछौंSpice, सिमेटिक्स, एलटीSpice र अन्य सिमुलेटरहरू। उपकरणहरूमा Opamps, डिकोटमेन्ट अर्धचालकहरू (डायोडहरू, MOSFETs, IGBTS आदि) SMPS आईसीहरू, एलईडी चालकहरू, AD र डीए कन्वर्टर्सहरू, माइक्रोकोन्टर्रोलरहरू (एआरएम, पीआईसी, एवीआर, एक्सएमसी आदि) र अधिक। TINA को विकासकर्ताको रूपमा, बजारमा सबैभन्दा छिटो सिमुलेटर मध्ये एक, हामीलाई सिमुलेशन एल्गोरिदमको गहिरो बुझाइ छ जुन हामीलाई सटीक र समय कुशल यन्त्र मोडेल अग्रिम गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईंलाई मोडेल विकास सेवा चाहिन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
TINA मा माइक्रोक्रोलरहरू (PIC, AVR, 8051, HCS, ARM, ST, ARduino, XMC) को एक विस्तृत दायरा पनि समावेश गर्दछ, त्यसपछि थप 1400 भागहरू, जुन तपाइँले परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, डिबग र मिश्रित सर्किट वातावरणमा सर्किट अनुकरण प्रयोग गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। एमसीयू संयोजकमा बनाइएकाले तपाईले तपाइँको कोडर कोड परिमार्जन गर्न र हेर्नुहोस्... परिणाम तुरुन्तै। तपाईं पनि प्रोग्राम-इन प्रवाहचार्ट उपकरण वा सी मा MC, र बाह्य सी कम्पिल्टरहरू र अन्य कोड जेनरेटरहरूको प्रयोग गरेर MCU हरू गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोचिप XC8, MATRIX FLOWCODE, XMC र Arduino को लागि इन्फिनिनन डेभि सहित।
TINA को निर्मित इन अनुकूलन उपकरण प्रयोग गरी अज्ञात सर्किट प्यारामिटरहरू स्वचालित रूपमा निर्धारण गर्न सकिन्छ ताकि सञ्जाल पूर्वनिर्धारित लक्षित आउटपुट मानहरू, न्यूनतम वा अधिकतम उत्पादन गर्न सक्दछ। अनुकूलन न केवल electroniccircuits को डिजाइन मा उपयोगी छ, तर पनि शिक्षण, मा... उदाहरणहरू र समस्याहरू निर्माण गर्नुहोस्। यो डिजाइन प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध परिणामहरू परिमार्जन गर्न वा पहिले नै काम गर्ने सर्किटहरू धुन गर्न एक राम्रो उपकरण हो। तपाईं आफ्नो सर्किट अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ TINA को डिजाइन उपकरणमा निर्मित डिजाइन संग डिजाइन समीकरण संग काम गर्दछ जुन तपाईं कुनै पनि सर्किट मा जोड सकते हो।
हामीले सफलतापूर्वक इन्फाइनन डिजाइनरलाई TINACloud द्वारा संचालित को लागी एक छोटो समय मा परिभाषित अनुप्रयोग को लागि सही उत्पादन को चयन मा हाम्रो ग्राहकहरु लाई समर्थन गर्न को लागि अनलाइन प्रोटोटाइप उपकरण को रूप मा संचालित गरे। TINACloud प्रयोग गर्न सजिलो छ, कुनै पनि वेब ब्राउजर धेरै स्थिर र छिटो बिना स्थापना बिना रन। यसले इन्फिनेसनको व्यापक अनुप्रयोग पोर्टफोलियोलाई पावरबाट मिश्रित-सिग्नल र आरएफ डिजाइनमा प्रयोग गर्दछ।
TINA SPICE एक उत्कृष्ट सर्किट सिमुलेटर हो। यसले छिटो कन्भर गर्दछ र एक सहज ग्राफिकल इन्टरफेस छ। नयाँ इञ्जिनियरहरूले यो शक्तिशाली उपकरण प्रयोग गर्दा धेरै छोटो शिक्षा वक्र छ।
मैले धेरै "स्वादहरू" प्रयोग गरेको छु Spice विगतका 25 वर्षहरूमा। पछिल्लो धेरै वर्षमा, मेरो प्रयोग spice अपरिहार्य भएको छ। फिर्ता जान र रिजर्न / याद गर्नुहोस् कसरी प्रयोग गर्ने spice औजारहरू एक कुखुरा हो। टीना, तथापि यति धेरै सहज छ कि यो प्रायः कुनै समय फेरि जाँदैन। मेरो अनुभवमा यो, टाढाबाट, सबैभन्दा सहज र बजारमा अनुकरण उपकरण प्रयोग गर्न सजिलो छ। यो नौसिखिया वा कहिलेकाही प्रयोगकर्ताको लागी आदर्श छ र यसमा सबै क्षमता रहेको पावर प्रयोगकर्ता चाहिन्छ।
मैले धेरै सिमुलेटरहरू प्रयोग गरेको छु, तर प्रयोग गर्न सजिलो छैन वा तिनाको रूपमा छिटो जस्तो। TINA को बहु-कोर समर्थन र बढेको अभिसरण एल्गोरिदमले अनुकरण गर्न द्रुत रूपले छिटो बनाउँछ। मैले CM, VM, प्रायः हरेक टोपोलोजी - गुनासो, पीडब्ल्यूएम र अर्ध-रेन्टोनन्ट र सिमुलेशनहरूको सेप्टेबल अन-टाइम कन्वर्टर्सको मोडेल बनाएको छ जुन अघिल्लो मिनेटमा छ। TINA अन्तर्क्रियात्मक मोड, प्रतीकात्मक विश्लेषण, व्याख्याकर्ता, जादूगर र डिजाइन उपकरणले TINA लाई अझ शक्तिशाली बनाउँछ! आयात गर्नुहोस् PSpice मोडेल निर्दोष!
धेरै फरक प्रयोग गरेर मैले एनालॉग इलेक्ट्रनिक्सलाई विश्वविद्यालय स्तरमा पढेको छु Spice अगाडि-अन्त्य - किनभने यो एउटा कार्ड 'डेक' थियो। पछिल्लो दशक वा यति TINA अन्तर्गत मेरो पसंदीदा सर्किट बिजुली र विद्युत उपकरण, परियोजना कार्य र केही व्यावसायिक अनुप्रयोगहरूको लागि विश्लेषण उपकरण रहेको छ। TINA प्रयोग गर्न सहज छ, गलत त्रुटिहरूको प्रक्रियामा सहायक, र परिणामहरू छिट्टै उत्पादन गर्दछ। TINA सँग शक्तिशाली विश्लेषण उपकरणहरू छन् जुन सर्किट सञ्चालनको समझमा सहयोग गर्दछ। यो सर्किट को प्राप्ति को लागि एक धेरै सीधा मार्ग पनि छ। हाम्रो विद्यार्थीले टाईनालाई आफ्नो डिजाइनको पहिलो वर्षमा एक बहुमुखी उपकरणको रूपमा स्वीकार्छन् र यसलाई उनीहरूको डिग्री पाठ्यक्रममा लागू गर्दछ। यो धेरै राम्रो मूल्य को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
मैले 40 वर्ष भन्दा बढीको लागि मास्को टेक्नोलोजी युनिवर्सिटी (एमआईआरए) मा विद्युतीय ईन्जिनियरिङ्, इलेक्ट्रनिक्स र कम्प्यूटर-एड्स डिजाइन (ईडीए) सिकेको छु। मेरो कक्षाहरूमा मैले इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू मोडलका लागि धेरै प्रोग्रामहरू प्रयोग गरेको छु - इलेक्ट्रनिक्स वर्कबेन्चबाट OrCAD र SystemC बाट। मलाई विश्वास छ कि बिजुली ईन्जिनियरिङ् र इलेक्ट्रनिक्सको शिक्षाको लागि TINA सबैभन्दा उत्तम सफ्टवेयर उपलब्ध छ। TINA सँग सरल सेटिङहरू र सिमुलेशनहरूको सेटअपसँग, धेरै अनुकूल ग्राफिकल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस छ। सर्कलको बारेमा सबै जानकारी एक फाइलमा संलग्न गरिएको छ, सिमुलेशनहरू धेरै छिटो र सही प्रदर्शन गरिन्छ, परिणाम प्रदर्शित भएका छन्, त्यसैले प्रक्रिया सजिलै विद्यार्थीहरू द्वारा महसुस गरिन्छ।
हामी हाम्रो पत्राचार पाठ्यक्रमहरूको लागि कक्षाहरूमा TINACloud कार्यक्रम प्रयोग गर्दछौं। यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, सबै प्लेटफार्महरूमा काम गर्दछ र हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई कुनैपनि समयमा र कहीं पनि सजिलो पहुँच संग प्रदान गर्दछ। TINACloud विद्यार्थीहरू प्रयोग गरेर प्रयोगशालामा सञ्चालन व्यावहारिक मापसँग सर्किट सिमुलेसन परिणामहरूको तुलना गर्न सक्षम छन्। यसले लामो समयदेखि शिक्षा सिकाउँदछ र हाम्रो विश्वविद्यालयको लागि अझ प्रभावकारी सिक्छ।